B2B: Fiidiyowyadu waxay saameyn ku leeyihiin go'aamada wax iibsiga | Martech Zone
Talaado, Oktoobar 5, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Fiidiyowga ayaa xoogaa lagu muujiyey suuqgeynta macaamiisha, laakiin fursadda dhabta ah waxay noqon kartaa suuq-geynta ganacsiga (B2B). Daraasad dhowaan ay soo saartay Eccolo Media, multimedia ayaa ugu sarreysa liiska dammaanadda iyada oo ah kuwa ugu dhakhsaha badan ee sii kordhaya ee go'aan qaadayaasha iyo saameyntu u adeegsanayaan inay ku gaaraan go'aannada wax iibsiga.
Sida aan ku helnay sahan kasta oo la soo dhaafay, noocyada inta badan la cuno ee dammaanad qaadku waa buugaagta wax soo saarka & waraaqaha xogta. Xaqiiqdii, jawaab-bixiyeyaashu waxay kordhiyeen oo keliya adeegsigooda noocaan ah sannadihii la soo dhaafay: min 70 boqolkiiba sanadkii 2008; ilaa boqolkiiba 78 sanadkii 2009; ilaa sanadkaan la helay boqolkiiba 83. Daraasado kiis iyo waraaqo caddaan ah, ka dib markii ay si aad ah uga soo bateen heerarka isticmaalka intii u dhaxeysay 2008 iyo 2009, waxay ku sii yaraadeen sidii hore intii u dhaxeysay 2009 iyo 2010. Isbedelada ugu weyni waxay ku yimaadeen inta jeer ee jawaab bixiyaashu ay cunayeen fiidiyowyo iyo fiidiyowyo iyo feylal maqal ah. Sannadkii 2008, keliya 28 boqolkiiba jawaab bixiyeyaashu waxay cuneen noocyada dammaanadda. Sannadkii 2009-kii, faylalka-fiidiyowgu waxay sameeyeen macaash dhexdhexaad ah illaa 32 boqolkiiba. Isticmaalka fiidiyowga ayaa si deeqsinimo leh uga kordhay 28 boqolkiiba 2008 ilaa 51 boqolkiiba 2009.
Tayo sare, qiimo jaban wax soo saarka fiidiyowga iyo martigelinta u muuqda inuu wado wax badan oo korsashada ah. Sidoo kale, xawaaraha sare ee bandwidth iyo xulashada sare ee qalabka iyo aaladaha si aad u daawato fiidiyowga ayaa ugu dambeyntii riixay warbaahinta guud ee guud. Fiidiyowgu wuxuu noqonayaa istiraatiijiyad lama huraan ah. Haddii aadan qaadan, waa inaad hadda dejisaa istiraatiijiyad… sahanku wuxuu bixinayaa caddeyn muujineysa in fiidiyowgu uu noqonayo mid muhiim u ah aaladdaha dammaanadda.
Waxaa jira tan macluumaad ah oo ku jirta Warbixintan Daraasadda B2B ee bilaashka ah - gaar ahaan dammaanadda leh saamaynta ugu sareysa: Wargeysyada Cad. Wargeysku wuxuu si qoto dheer u fahansiinayaa waxa ka dhigaya joornaalada waaweyn kuwo weyn iyo waxa keena inay fashilmaan, iyo waliba baaxadda shirkadaha ay soo jiitaan.
Tags: dib u eegista martigelintameeleynta james bondjeexMari Smithemayl kiciyayfariin muuqaal ahQoraalka